Fiatrehana ny covid-19 : Hosokafan’ny Fitondram-panjakana indray, ny CTC-19 Soamandrakizay – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:38
Hiverina hisokatra indray ny CTC-19 Soamandrakizay.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/Fiatrehana ny covid-19 : Hosokafan’ny Fitondram-panjakana indray, ny CTC-19 Soamandrakizay
Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Zely Arivelo Randriamanantany omaly hariva, tao amin'ny Birao fiasany tao Ambohidahy. Nohamafisiny fa « maimaimpoana ny fanafody sy ny fandraisana an-tanana ireo marary ary hosokafan’ny Fitondram-panjakana indray ny CTC-19 Soamandrakizay eny Androhibe anio, mba hahafahan’ny olona rehetra misitraka ny fitsaboana ». Isan’ireo Faritra nahitana tranga maro indrindra voan’ny coronavirus ny teto Analamanga, raha ny antontanisa farany nivoaka…
Rado Harivelo 27 décembre 2021
Laharam-pahamehan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny, izay tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina ny fahasalamam-bahoaka, amin’ny alalan’ny velirano fahadimy, tamin’ny vahoaka malagasy. Nambaran’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, fa tahaka ny Firenen-drehetra manerana izao tontolo izao, dia miatrika ny valanaretina covid-19 i Madagasikara, ary efa eo amin’ny 21 volana eo no niatrehan’ny vahoaka malagasy izany. Ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka dia nanaraka tsara ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra ary hatramin’izao dia manatsara hatrany ny paikady, mba hiatrehana izany ady izany. Nisy ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety ho fampahafantarana nataon’ ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Zely Arivelo Randriamanantany omaly hariva, tao amin’ny Birao fiasany tao Ambohidahy. Nohamafisan’ ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka nandritra izany fa « maimaimpoana ny fanafody sy ny fandraisana an-tanana ireo marary ». Araka ny nambarany, hosokafan’ny Fitondram-panjakana amin’ity anio ity, ny CTC Soamandrakizay, eny Androhibe, mba hahafahan’ny olona rehetra misitraka ny fitsaboana, toy ny fahazoana ny « oxygène », izay misy toerana manodidina ny 148. Natao izany, hanampiana ny Village Voara etsy Andohatapenaka. Nanterin’ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Zely Arivelo Randriamanantany fa tsy mbola feno ny Village Voara, fa hisorohana mialoha no antony nanokafana ny CTC-19 eny Soamandrakizay. Ho fandraisana an-tanana haingana ireo mararin’ny Covid-19 maneho “forme modérée”, izay maneho fahasemporana ary ilàna fampiasana “Concentrateurs d’oxygène” dia noraisina izao fepetra izao, hisorohana koa ny mety ho fivoaran’ny aretina mankany amin’ny tranga misy fahasarotana. Nialoha ny fisokafana izao, nisy ny fanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manaon’ny mpiasan’ny fahasalamana, izay teo ambany fitarihan’ Andriamatoa Sekretera Jeneraly.
Fitondrana vahaolana ho an’ny vahoaka…
Ny minisitry ny Fahasalam-bahoaka, Zely Arivelo Randriamanantany.
Tafiditra ao anatin’izany paikady izany, ny fitsaboana manakaiky vahoaka, na ny fotodrafitrasa, na ny fitaovana na ny fitiliana, na ny fanafody na ny olombelona izay miasa eo anivon’ny Fahasalamana, dia miara-miasa amin’ny fanakaikezana ny vahoaka izany. Isan’ny ezaka goavana notanterahin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ny fanapariahana ny fitiliana. Notsiahiviny fa raha PCR fotsiny ny nanaovana fitiliana momba ny valanaretina coronavirus izany, dia amin’izao fotoana, efa nampiana TDR, izay aparitaka manerana ny Faritra. Tsy nohadinoina koa ny fampitaovana ny LA2M, izay misy eto an-drenivohitra. Amin’izao fotoana izao, dia efa an-dalam-pamaranana ny LA2M miisa fito, ny Fitondram-panjakana, mba hahafaha-manapariaka izany fitiliana izany.Eo koa ny fanapariahana ny « Genexpert », izay fitaovana azo itiliana ny coronavirus, saingy ny teknika hanatanterahana azy fotsiny no samy hafa. Efa misy « Genexpert » miisa 27 nozaraina any amin’ny faritra any, ary an-dalam-pizarana miisa 20 hafa ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka amin’izao fotoana izao. Natao izany, mba hahafaha-mitily ny coronavirus, amin’ireo distrika farany lavitra indrindra.
Ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, dia mipetraka hatrany ho vahaolana ho an’ny vahoaka malagasy, izay miatrika ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina covid-19. Nojerena mialoha ny fametrahana ireo fitaovana ilaina, tafiditra ao anatin’izany ny « Concentrateurs d’oxygène » apetraka amin’ireo hopitaly lehibe manerana an’Antananarivo sy ny hopitalin’ny Faritra sy ny distrika. Tsy nohadinoina koa ny fametrahana ny CVO tambavy amin’ireo toerana maro isan-tokony ireo. Ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka dia miara-miasa amin’ireo minisitera samy hafa. Mitohy, araka izany, ny fanentanana ny vahoaka, amin’ny alalan’ny fepetra sakana. Ho an’ny olona izay efa nanatona ny CSBII, dia efa mizara fanafody eny ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Raha vantany vao misy soratr’aretina, dia manatona avy hatrany ny tobim-pahasalamana fa tsy efa lasa lavitra be ny aretina, na tonga any amin’ny tranga misy fahasarotana vao manatona. Ho an’ireo olona izay manatona eny amin’ny Village Voara, ny ¼ ny olona manatona eny dia adiresy diso no omeny. Vokany, lasa manano sarotra ny fitadiavana azy ireo, indrindra rehefa fantatra fa miabo voan’ilay aretina. Ireny olona ireny, raha tsy mahazo fanafody, dia mety hiafara, hatramin’ny tranga misy fahasarotana.